Tag: utm_ Medium | Martech Zone
Tag: utm_ Medium
Loharano fifamoivoizana hafa ao amin'ny Google Analytics?
Asabotsy 14 Febroary 2009 Asabotsy 20 Febroary 2016 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity tany am-piasana dia nanontany ny iray amin'ireo mpanjifanay hoe inona ny loharanom-pifamoivoizana "hafa" ao amin'ny Google Analytics (GA). Tsy dia misy antsipirihany loatra ao amin'ilay tena interface ho an'ny Google Analytics ka mila mihady ianao. Ny loharanom-pifamoivoizana dia fantatra ihany koa ho mpanelanelana amin'ny GA. Nihady kely aho ary hitako fa ny Google Analytics dia misambotra azy ho azy ho an'ny mpanelanelana sasany, ny mailaka malaza indrindra. Mba hahitana ny lisitry ny